GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian Vietnamese
MA ÀNYỊ ma ma ọ bụ na anyị amaghị, ejiji na-ewunụ na-emetụta, ma ọ́ dịghị ihe ọzọ ruo n’ókè ụfọdụ, mkpebi ndị anyị na-eme kwa ụbọchị banyere ihe ndị anyị ga-eyi. Mee elu mee ala, mmetụta dị ike nke ejiji na-ewunụ na-enwe na-ekpebi n’ụzọ dị ukwuu ụdị uwe ga-adị n’ahịa.
Ọbụna ụdị uwe ndị anyị na-ejighịzi akpọrọ ihe ugbu a nwere oge ha na-ewu ewu. Dị ka ihe atụ, uwe ụmụ nwoke na-eyi akpọ taị nakwa taị n’onwe ya, ghọrọ ejiji na-ewu nnọọ ewu kemgbe ihe karịrị otu narị afọ gara aga. Uwe oyi ụmụ nwanyị ghọkwara ihe wuru ewu laa azụ n’afọ ndị 1920.
Ọchịchọ abụọ bụ́ isi na-eme ka ọrụ imepụta ejiji na-aga aga—ọchịchọ maka ihe ọhụrụ na ọchịchọ nke iso biri. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ nile na-enwe mmasị iyi uwe ọhụrụ. Ọ bụ ya mere mgbe ụfọdụ, anyị na-azụ uwe ndị ọhụrụ, ọ bụghị n’ihi na nke anyị nwere enwe akaala, kama ọ bụ nanị n’ihi na anyị chọrọ ime mgbanwe. E wezụga nke ahụ, anyị adịghị achọ iyi uwe na-ekwesịghị ekwesị, n’ihi ya, anyị na-azụrụ uwe ndị yiri n’ókè ụfọdụ ụdị nke ndị anyị na ha na-akpakọrịta na-eyi. Eri ọtụtụ narị afọ, ndị na-emepụta ejiji emejụwo ọchịchọ maka ihe ọhụrụ nakwa ọchịchọ nke iso biri—mgbe ụfọdụkwa, ha ejiwo ha mee ihe maka uru nke onwe ha.
Akụkọ Dị Mkpirikpi Banyere Otú E Si Emepụta Ya
Iji mepụta otu ụdị ejiji, ọ dị ụzọ ihe ise bụ́ isi ndị na-emepụta ejiji na-elekwasị anya: àgwà, otú ákwà ga-adị ma a kwachaa ya, otú a ga-esi pịa ákwà ma a kwawa ya, ọdịdị ya, na otú akara ya ga-esi kwekọọ n’akụkụ ya nile ma a kwachaa ya. Nhọrọ ndị na-emepụta ejiji na ndị na-akwa ákwà nwere n’ụzọ ihe ise a amụbaala n’afọ ndị gafeworonụ. Dị ka ihe atụ, n’Ijipt oge ochie, a họọrọ ákwà linin ndị na-ahụ ụzọ, bụ́ ndị e mepụtara ná mba ahụ, dị ka ndị kasị mma, o kwesịkwara ekwesị maka ebe na-ekpo ọkụ. Ma ebe ọ bụ na ọ naghị adị mfe isiji ákwà linin esiji, ọ na-enwekarị nanị otu àgwà—a na-eme ka ọ chaa ọcha. Ma, ndị Ijipt na-emepụta ejiji na-asụ̀ ákwà ha àsụ̀ iji mee ka ọ dị mma n’anya ma a kwachaa ya. E si otú ahụ mepụta otu n’ime ụdị ejiji ndị kasị nọtee aka n’ụwa.
Ka ọ na-erule na narị afọ mbụ O.A., a bịara nwee ákwà ndị ọhụrụ na àgwà ndị ọhụrụ. Ndị Rom bụ́ ndị aka ji akụ̀ si na China ma ọ bụ n’India na-atụbata ákwà silk, n’agbanyeghị na ihe a na-emefu iji bubata ya mere ka ákwà silk e kwere ekwe daa ọnụ ka ọlaedo. Ákwà ọzọ wuru ewu bụ nke e ji ajị anụ e sijiri esiji nke si Taịa mee, nke otu kilogram ya pụrụ ịda denarius 2,000—ụgwọ ọrụ afọ isii nke onye na-akpata afọ ya. Ihe ọhụrụ ndị e ji esiji ákwà na ákwà ndị ọhụrụ e nwere mere ka ndị inyom Rom bụ́ ndị aka ji akụ̀ nwee ike ịdị na-eyi stola—uwe elu dị ogologo ma dị owoghoro—nke ihe e ji mee ha bụ ogho na-acha anụnụ anụnụ e nwetara n’India ma ọ bụ ikekwe ákwà silk na-acha odo odo e nwetara na China.
Ọ bụ ezie na ụdị ejiji ndị ọhụrụ na-apụta site n’oge ruo n’oge, n’ọgbọ ndị gara aga, uwe dara oké ọnụ pụrụ iwu ewu n’afọ ndụ nile. Mgbanwe ndị a na-enwe na-abịa nwayọọ nwayọọ, ọ na-abụkarịkwa nanị ndị a ma ama ka ọ na-agbasa. Otú ọ dị, mgbe a bịara nwee mgbanwe n’usoro mmepụta ihe, ejiji malitere ịgbasa ndị nkịtị karị.
N’ime narị afọ nke 19, a bịara nwee ụlọ ọrụ ndị ọrụ ha bụ imepụta ákwà maka ndị ọgaranya nakwa ndị ogbenye. Ụlọ ọrụ ndị na-eji ígwè ọrụ emepụta ákwà ogho na ndị e ji ajị anụ mee mụbara, ọnụ ahịa ákwà dalatakwara. N’ihi inwe ígwè ndị e ji akwa ákwà, a pụrụ imepụta uwe n’ọnụ ego dị ala karị, ihe ọhụrụ ndị e ji esiji ákwà, bụ́ ndị mmadụ mere, mekwara ka e nwekwuo àgwà dị iche iche a pụrụ ịhọrọ.
Mgbanwe ndị e nwere n’etiti ọha mmadụ nakwa na nkà na ụzụ keere ọbụna òkè ka ukwuu n’ime ka ọha mmadụ nwee ihe ndị ha ga na-eyi. N’Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe nakwa n’Ebe Ugwu America, ndị mmadụ nwere ego ka ukwuu ha ga na-emefu. N’afọ ndị 1850, a bịara nwee magazin ndị na-akọ banyere ndị inyom, n’oge na-adịghịkwa anya mgbe nke ahụ gasịrị, a malitere ikowe uwe ndị a kwarala akwa hà otú kwesịrị ekwesi ná nnukwu ụlọ ahịa dị iche iche. Na narị afọ nke 19 kwa, Charles Frederick Worth mere ka e nwee ebe ngosi ejiji, na-eji ndị mmadụ egosi ụdị ejiji dị iche iche iji kpalie mmasị nke ndị ga-achọ ịzụ ha.
Na narị afọ nke 20, eri ndị ọhụrụ mmadụ mere, dị ka rayon, nylon, na polyester, mere ka ndị na-emepụta ákwà nwee ike imepụta ụdị ákwà dịgasị iche iche. Ụkpụrụ ejiji ndị e ji kọmputa see mere ka ọ dị mfe imepụta ụdị ejiji ndị ọhụrụ, n’ihi ijikọ ụwa ọnụ, ejiji ndị ọhụrụ pụkwara ịpụta na Tokyo, New York, Paris, na São Paulo n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’otu oge. Ka ọ dịgodị, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ejiji na ndị na-emepụta ejiji achọpụtawo ụzọ ndị ọhụrụ ha ga-esi na-akwalite ngwá ahịa ha.
Taa, kama ịbụ ndị aka ji akụ̀, ọ bụzi ndị na-eto eto ka ejiji kasị echu ụra. Ọtụtụ nde n’ime ha na-azụ uwe ọhụrụ kwa ọnwa, ụlọ ọrụ na-emepụta uwe na-emepụtakwa uwe ruru ọtụtụ narị ijeri dollar kwa afọ. * Ma è nwere ọnyà ndị dị na ya?
^ par. 12 N’otu afọ na-adịbeghị anya, e mere atụmatụ na ọnụ ahịa uwe ndị e mepụtara n’otu afọ ahụ dị ijeri dollar 335.
Ndị Na-eme Ka Ejiji Na-ewu Ewu
Ruo ọtụtụ narị afọ, ọ bụ ndị eze na ndị a ma ama na-esetịpụ ụkpụrụ a ga-agbaso n’ihe banyere ejiji. Na narị afọ nke 17, Eze Louis nke Iri na Atọ nke France kpebiri ikpu wig iji kpuchie isi nkwọcha ya. N’oge na-adịghị anya, ndị a ma ama na Europe nọ na-akpụchasị ntutu ha ma malite ikpu wig—ụdị ejiji wugidere gafee otu narị afọ.
Na narị afọ nke 19, magazin ndị na-ekwu banyere ndị inyom kpọsara ụdị ejiji ọhụrụ e nwere, ọbụna sepụtakwa ụkpụrụ uwe ndị na-adịghị oké ọnụ iji mee ka ndị inyom nwee ike ịkwara onwe ha uwe. Na narị afọ nke 20, ka ihe nkiri sịnịma na telivishọn bịara bụrụ nke na-ewu ewu, ndị a ma ama na-eme ihe nkiri ghọrọ ndị a na-asọpụrụ ná mba nile, ha guzobekwara ụkpụrụ dị iche iche nke iji ejiji. Ndị oti egwú a ma ama malitekwara iji ejiji ndị gbapụrụ nnọọ iche, bụ́ ndị ọtụtụ ndị ntorobịa na-egbughị oge n’iṅomi. Taa, ihe agbanwebeghị hie nne ka ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-eji ngosi ejiji, magazin ndị na-egbuke egbuke, bọọdụ mkpọsa, windo ụlọ ahịa, na mkpọsa ngwá ahịa telivishọn eme ihe n’ụzọ dị irè iji mee ka ndị mmadụ chọọ ịzụ uwe ndị ọhụrụ.
Eze Louis nke Iri na Atọ
Site n’akwụkwọ bụ́ The Historian’s History of the World
Ákwà linin Ijipt a so n’otu n’ime ejiji ndị kasị wutee aka
Foto e sere site n’ikike nke British Museum
Na Rom oge ochie, ndị inyom yiri uwe “stola”
Site n’akwụkwọ bụ́ Historia del Traje, 1917
[Foto dị na peeji nke 4, 5]
Ejiji bụ́ “kimono” adịwo adị kemgbe ihe dị ka afọ 650 O.A.
Site n’akwụkwọ akụkọ bụ́ La Ilustración Artística, Mpịakọta nke Iri, 1891
N’ọgbọ ndị gara aga, uwe ndị dara oké ọnụ pụrụ iwu ewu n’afọ ndụ nile
Mgbanwe e nwere ná mmepụta ihe mere ka o kwe ndị nkịtị mee iji ejiji kpọrọ ihe
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mgbanwe Ejiji Na-agbanwe